Animation – Channel Myanmar
Tom and Jerry Special Collection ကဲ ပုံ​လေး​တွေကို မြင်​လိုက်​တာ နဲ့ ခပ်​များများ​တော့ ​ပြော ဖုိ့ လိုဦးမလားဗျ။ လူတစ်​​ယောက်​ကို မင်း ​ကြောင်​နဲ့ကြွက်​ ကား ကြိုက်​ လား လို့ ​မေးကြည့်​။ မကြိုက်​ဘူး ​ပြောရင်​ ​သေချာတယ်​ လိမ်​ တာပဲ။ တခြား ကာတွန်း ကား​တွေ နဲ့ မတူ ဘဲ ဘယ်​အချိန်​ ကြည့်​ကြည့်​ ဘာပြီးရင်​ ဘာဖြစ်​မယ်​ အလွတ်​ ရ​နေတာ​တောင်​မှ ထပ်​ကာထပ်​ကာ ကြည့်​ မရိုးဘူးဗျ။ လက်ဖက်သုတ်လို​ပေါ့။ ​ခဏခဏစား​နေရလည်း မရိုးနိုင်​တာမျိုး။ ​ကြောင်​နဲ့ကြွက်​ ကြည့်​ပြီးရင်​ စိတ်​လက်​ ​ပေါ့ပါးသွားတတ်​တာ ထုံးစံဗျ။ ကာတွန်း ဆွဲ ခဲ့တဲ့ လူ​တွေ ဂါထာ​တွေနဲ့ မန်းမှုတ်​ပြီး ဆွဲ ထားသ​လားမှတ်​ရတယ်​။ ဘယ်​​တော့မှ မမုန်းဘူးဗျ။ ​နောက်​တစ်​ခု ရယ်​ရတာက တခြားကား​တွေ violence and gore ...
Tom and Jerry Special Collection
5 Centimeters Per Second (2007)5Centimeters Per Second (2007)**********************************(1080p Blueray Update) " ငါတို့တှဟော အကွိမျပေါငျးထောငျခြီအောငျ စာတှအေပွနျလှနျရေးပို့နကွေလဲနှလုံးသားတှကေတော့ တဈ စငျတီမီတာတောငျ နီးစပျမလာခဲ့ကွပါဘူး..." တိုနို-တာကကီ (5 Centimeters Per Second) ခယျြရီပှငျ့ဖတျလေးတှေ အပငျပျေါကနမွေပွေငျအထိ ကွှကေတြဲ့အရှိနျက တဈစက်ကနျ့မှာ ငါးစငျတီမီတာနှုနျး ရှိတယျတဲ့...မွပွေငျကနလှေတျတငျလိုကျတဲ့ အာကာသယာဥျတဈစီးကတော့ တဈနာရီကို မိုငျပေါငျး တဈသောငျးရှဈထောငျနှုနျးနဲ့ ကမ်ဘာမွကေ တဖွညျးဖွညျး ဝေးကှာသှားတယျဦးတညျခကျြရှိတဲ့ လားရာတှကေဘယျလောကျအခြိနျတှကွောပါစေ တဈခြိနျခြိနျမှာ လိုရာခရီးကို ရောကျနိုငျဦးမှာပဲမဟုတျလား...ဒါပမေယျ့တဈခြို့ ဦးတညျခကျြမရရောပဲ မြှျောလငျ့ခကျြတဈခုတညျးနဲ့ လှတျတငျမိခဲ့တဲ့ ယာဥျတှကေတော့ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျကိုရောကျနိုငျမလဲ...Massage တှေ ထောငျခြီ အပွနျအလှနျပို့နခေဲ့ပမေယျ့ နှလုံးသားတှေ တဈစငျတီမီတာလောကျတောငျ နီးမလာတဲ့အခါ...အခြိနျတှအေကွာကွီးစောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရပမေယျ့ မြှျောလငျ့တဲ့သူပွနျမလာတဲ့အခါ...အမြားကွီးကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ကွိုးစားမှုတှေ အရာမထငျခဲ့တဲ့အခါတှမှောရော...ငါတို့... လားရာမရှိတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြယာဥျတှကေိုလှတျတငျနမေိသလိုပဲမဟုတျဘူးလား..တဈခါတဈလကေရြငျ လူတှကေကိုယျ့ရဲ့အဝေးကိုမြှျောနရေငျး ဘေးကကိုယျ့ကိုတနျဖိုးထားတဲ့သူတှအေရာတှကေို သတိမထားမိတတျကွဘူးလတေဈဖကျကပွနျတှေးကွညျ့ရငျတော့ ခယျြရီပှငျ့ဖတျလေးတှကေ မွပွေငျကိုပဲ ဦးတညျပွီးတော့သှားနတောလားဒါမှမဟုတျ မိခငျအပငျအကိုငျးအခတျတှဆေီကပဲ တဈစက်ကနျ့မှာ ငါးစငျတီမီတာနှုနျးဝေးကှာခဲ့ကွတာပဲလားဘယျသူသိနိုငျမလဲ....#5cm_per_second #Makoto_Shinkai Review : Han Htoo Zaw File Size – 674 MB Quality ...
IMDB: 7.6/10 50,876 votes
Alvin And The Chipmunks 2: The Squeakquel (2009) ဒုတိယဇာတ်ကားဟာလည်း ပထမဇာတ်ကားလိုပဲ အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ဇာတ်လမ်းကတော့ အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ဗင်တို့ရှဥ့်ညီနောင်တို့အတွက် ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်...သူတို့ကလည်း ရှဥ့်မလေးတွေဖြစ်ပြီး Chipettes လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်...သူတို့လေးတွေရဲ့ နာမည်တွေကတော့ ဘရစ်တနီ (Brittney) ၊ ဂျနက်တီ (Jeanette) နဲ့ အယ်လန်နော် (Eleanor) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…သူတို့ ၂ ဖွဲ့ဟာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းရဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်...ဘရစ်တနီတို့ အဖွဲ့ကိုတော့ လန်ဟော့ကပဲ တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်...ဘရစ်တနီတို့အဖွဲ့ကလည်း အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘန်ဟော့ဆီရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်… ဒီ ၂ ဖွဲ့ရဲ့ အားပြိုင်မှုက ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ ?? ဘယ်အဖွဲ့က အနိုင်ရမလဲ ?? ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဇာတ်ကားက ပထမကားထက်အရှိန်ပိုကောင်းလာပြီး ရှဥ့်မလေးတွေကလည်း ပရိတ်သတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်...နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Charice လည်းတစ်ခန်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်...သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်... ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb rating 4.4/10 ရရှိထားပါတယ်(ဇာတ်ကားအညွန်းရေးသူကတော့ Ye’ Kyaw Htetပဲ ဖြစ်ပါတယ်)@joker
Alvin And The Chipmunks – 1 (2007) ဒီကားလေးကတော့ ကလေးလူငယ်လူကြီးမရွေးနှစ်သက်ခဲ့ကြတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ...ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင် ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေမှာကတည်းကနာမည်ရခဲ့ပြီး Chipmunks songs Album ဆိုရင်လည်း ဂရမ်မီ ၅ ဆုအထိရခဲ့ပါတယ်...ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်...ကဲ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးသွားရအောင်တစ်ခါတုန်းက တောတစ်ခုထဲက သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာ ရှဥ့်ညီနောင်သုံးကောင်နေကြပါတယ်... သူတို့လေးတွေမှာ နာမည်ကိုယ်စီရှိတယ်ဗျ... အယ်လ်ဗင် (Alvin) ၊ ဆိုင်မွန် (Simon) နဲ့ သီအိုဒေါ (Theodore) တဲ့...ဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့ဆောင်းခိုချိန်ရောက်လာပါတော့တယ်...တစ်နေ့မှာ သူတို့တွေရဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ခုတ်ပြီးကားနဲ့သယ်ယူသွားခြင်းခံလိုက်ရပြီး...သူတို့တွေကတော့ သစ်ပင်ကြီးထဲမှာ အိပ်နေတဲ့အတွက်မသိလိုက်ပါဘူး...သစ်ပင်ကြီးဟာ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အဖြစ်နဲ့ လောစ့်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကိုရောက်သွားပါတယ်...ရှည့်ညီနောင်တွေ နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ တိုင်ပတ်ပါလေရော...ဟိုဒီလျှောက်ပြေးရင်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကိုရောက်သွားပါတယ်...အဲ့ဒီလူကတော့ ဒေဗ့်စဗီလီ (Dave Seville) လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Entertainment ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်အတွက် ရုန်းကန်နေရသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်...ရှဥ့်ညီနောင်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ လက်ခံထားပေမယ့် မျောက်ရှုံးအောင်ကဲကြတဲ့အတွက် ဒေဗ့်အတွက်စိတ်ပျက်စေခဲ့ပါတယ်...ဒါပေမယ့် ရှဥ့်လေးတွေရဲ့ အရည်အချင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဒေဗ့်ရဲ့စိတ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်...ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရှဥ့်လေးတွေမှာ သီချင်းကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့အပြင် သာယာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အသံလေးတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်...အဲ့ဒီအခါမှာ ဒေဗ့်ရဲဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ရှဥ့်လေးတွေရဲ့အရည်အချင်းကိုပေါင်းစပ်ပြီး ကုမ္ပဏီကိုတင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်... ဒီအချိန်မှာ ဗီလိန်ပေါ်လာပါပြီ... သူကတော့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ...
Alvin And The Chipmunks – 1 (2007)
Minions (2015) အားလုံးစောငျ့မြှျောနတေဲ့ Minion 2015 ကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ..အဆငျပွနေိုငျကွပါစေ :D Minion တှဟော ကမ်ဘာဦးအစ ကတညျးက ဆဲတဈခုတညျးနဲ့ တညျရှိခဲ့တဲ့ အဝါရောငျ သတ်တဝါလေးတှဖွေဈပွီး အငျအားအကွီးမားဆုံး အဆိုးသှမျးဆုံး အကောငျကိုသာ လုပျကြှေးပွုစုခငျြကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အငျအားကွီးမားတဲ့ T.Rex ဒိုငျတိုဆောတှေ၊ ကြောကျဂူလူသားတှေ နောကျကို လိုကျခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွခေဲ့ပဲ ဉာဏျပညာကွီးမားတဲ့ လူသားတှအေပျေါ နှဈသကျတဲ့ စိတျကွောငျ့ အဆိုးသှမျးဆုံး လူတှဆေီကိုသာ နောကျလိုကျအဖွဈ ပါဝငျပွုစုခဲ့ပါတယျ။ အီဂဈြဖာရို၊ ဒရကျဂူလာနဲ့ နပိုလီယံတို့ကို အလုပျအကြှေး ပွုခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွခေဲ့ပဲ အန်တာတိကမှာ သီးသနျ့သှားရောကျနထေိုငျနကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နှဈတှေ ကွာလာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြတှေ ပြောကျဆုံးကုနျပွီး စိတျဓာတျကြ ငွီးငှကေုနျကွပါတယျ။ ဒီ Minion အပေါငျးကို ကယျတငျဖို့အတှကျ သတ်တိကောငျးတဲ့ Kevin ဟာ သူ့ရဲ့ အကွံကို Minion တှအေားလုံး ကွားမှာ ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ...
IMDB: 6.4/10 205,246 votes
Tangled Ever After (2012) ဒီဇာတျလမျးတိုလေးက အရငျ Tangled ကားလေးရဲ့ အဆကျပဲဖွဈပါတယျ...ပထမကားမှာ ရာပှနျဇယျနဲ့ ယူဂငျြးတို့ ခဈြသူတှဖွေဈသှားကွပမေဲ့ လကျမထပျရသေးပါဘူး...ဒီဇာတျလမျးတိုလေးကတော့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ လကျထပျပှဲအကွောငျးလေးကို ထပျမံဖွညျ့စှကျ ရိုကျကူးထားတာလေးပါ...ကွညျနူးစရာကောငျးပွီး ရာပှနျဇယျရဲ့ တောကျတဲ့လေးနဲ့ မွငျး မကျစီမကျဈတို့ နှဈကောငျရဲ့ အလှဲလေးတှေ စှနျ့စားခနျးတှကေို ဟာသအနနေဲ့ ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ... ပွသခြိနျ ၆ မိနဈခှဲလောကျပဲကွာပမေယျ့ ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ဒီဇာတျလမျးတိုလေးဟာ ကွညျ့ရကြိုးနပျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ... ခံစားအားပေးကွပါဦး..ဘာသာပွနျသူနဲ့ အညှနျးရေးသူကတော့ Ye’ Kyaw Htetပဲ ဖွဈပါတယျ ----------------------------------------------------- ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးက အရင် Tangled ကားလေးရဲ့ အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်...ပထမကားမှာ ရာပွန်ဇယ်နဲ့ ယူဂျင်းတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပေမဲ့ လက်မထပ်ရသေးပါဘူး...ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲအကြောင်းလေးကို ထပ်မံဖြည့်စွက် ရိုက်ကူးထားတာလေးပါ...ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး ရာပွန်ဇယ်ရဲ့ တောက်တဲ့လေးနဲ့ မြင်း မက်စီမက်စ်တို့ နှစ်ကောင်ရဲ့ အလွဲလေးတွေ စွန့်စားခန်းတွေကို ဟာသအနေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်... ပြသချိန် ၆ မိနစ်ခွဲလောက်ပဲကြာပေမယ့် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ...
IMDB: 7.6/10 15,775 votes
Song of the Sea (2014) Song of the Sea (2014)IMDb - 8.1/10_____Rotten - 99% ၂၀၁၅ ခုနှဈ ၈၇ ကွိမျမွှောကျ အျောစကာဆုရှေးပှဲမှာ Academy Award for Best Animated Feature ဆုအတှကျ ဆနျကာတငျပါဝငျခဲ့တဲ့ဇာတျကားပါ။ ဒီဇာတျကားရဲ့ အညှနျးထကျ ရရှိထားတဲ့ Rating တှကေ ပိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျ။ IMDb Rating (8.1/10) Rotten Tomatoes (99%) Metacritic (89%) ဘာလို့ ဒီလောကျ Rating တှမွေငျ့နတေယျဆိုတာကတော့ ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှုခံစားပေးကွပါဦး။ (မွနျမာစာတနျးထိုးကိုတော့ Nyi Thanlwin မှကိုယျတိုငျဘာသာပွနျတငျဆကျလိုကျတာပါ။) ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၈၇ ကြိမ်မြှောက် အော်စကာဆုရွေးပွဲမှာ Academy Award for Best Animated Feature ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အညွှန်းထက် ရရှိထားတဲ့ Rating တွေက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ IMDb Rating (8.1/10) Rotten Tomatoes (99%) Metacritic (89%) ဘာလို့ ဒီလောက် Rating ...
IMDB: 8.1/10 49,810 votes
Frozen Fever (2015) Frozen Fever (2015)_____IMDb - 6.9/10 တကယျတမျး Short Movie အနနေဲ့ ထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး ၈ မိနဈစာပဲ ရှိပမေယျ့ တဈခွား Animation Cartoon ရုပျရှငျတှရေဲ့ Short Movie တှလေို မဟုတျပဲ ကွညျ့ရတာ စိတျထဲ ပြျောရှငျမှုလေး တကယျရပါတယျ Elsa နဲ့ Kristoff တို့ ရဲ့ Anna အတှကျ စိတျလှုပျရှားဖှယျ မှေးနအေ့စီအစဉျလေး ပွုလုပျပုံလေးက အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးနပေါတယျ.. ဒီအပိုငျးတိုလေးအတှငျးမှာ အနျနာ နဲ့ အလျဆာ တို့ ရဲ့ ဝတျစုံဒီဇိုငျးကို သတိထားကွညျ့ပါ အတျောလေးကို ထူးခွား လှပနပေါတယျ... အိပျပြျောနတေဲ့ အနျနာ ကို အလျဆာ က သှားနှိုးလာပွီး အဝတျအနီစကွိုးလေး တဈကွိုးကို ဆှဲခိုငျးကာ တောကျလြှောကျ လကျဆောငျလေးတှေ တဈခုပွီး တဈခုပေးပါတယျ အဲ့ဒီ ...
IMDB: 6.9/10 13,885 votes
ParaNorman (2012) ParaNorman (2012) IMDb - 7.0/10_____Rotten - 89% ဒီကားလေးဟာ မကျဆာခြူးဆကျပွညျနယျရဲ့ မွို့ဟောငျးတဈခုကို အခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ သရဲဇတျလမျးကား တဈကားပါ... အသကျ ၁၁ နှဈအရှယျ နျောမနျ (Norman Babcock) ဆိုတဲ့ ကောငျလေးကတော့ အဓိကဇတျကောငျနရောကနပေါဝငျထားပါတယျ... နျောမနျ့မှာ မှေးရာပါစှမျးရညျတဈခု လကျဆောငျရထားပါတယျ... အဲ့ဒါကတော့ သဆေုံးသှားတဲ့ဝိညဉျတှကေို မွငျတှနေို့ငျပွီး စကားပွောနိုငျတာပါ... သူမွငျတှနေ့ရေတာတှကေို ဘယျသူမှ မမွငျတဲ့အတှကျ အရူးတဈယောကျလို သတျမှတျခံထားရပါတယျ... သူ့မိသားစုကကတောငျ သူ့ကိုမယုံပါဘူး... သူတို့မွို့လေးမှာ စုနျးမတဈယောကျရဲ့ကြိနျစာအကွောငျး ပုံပွငျဇာတျလမျးလေးရှိနခေဲ့ပါတယျ... ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ ဇာတျလမျးမှာ အမှနျတကယျရှိနခေဲ့ပါတယျ... နောကျပွီး အဲ့ဒီမွို့လေးကလူတှအေားလုံးရဲ့ကံကွမ်မာနဲ့သကျဆိုငျနပေါတယျ... ဒီလိုနဲ့ တဈနမှေ့ာ ဝိညဉျတှနေဲ့ စကားပွောဆိုနိုငျတဲ့ နျောမနျ့ဆီကို စုနျးမရဲ့ကြိနျစာကိုရပျတနျ့ပေးဖို့ ရုတျတရကျတာဝနျတဈခုပေးခွငျး ခံလိုကျရတဲ့ အခါမှာတော့..... နျောမနျတဈယောကျ စုနျးမရဲ့ ကြိနျစာကို ရပျတနျ့နိုငျပွီး လူတှအေားလုံးကို ကယျတငျနိုငျမှာလား... စုနျးမကရော ဘယျလိုအဆုံးသတျသှားမလဲ ဆိုတာတှကေိုတော့ ဆကျလကျရှုစားကွပါဦးလို့.... ဒီကားလေးဟာ ပထမဆုံး အရုပျသေးသေးလေးတှေ နဲ့ stop-motion 3D နညျးပညာကို သုံးထားတဲ့ Animation ကား တဈကားဖွဈပါတယျ... ရုပျရှငျကားကို ...
IMDB: 7.0/10 92,965 votes
Back To The Jurassic (2015) 2015 ခု နှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Back To The Jurassic ဆိုတဲ့ Animation ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်..ဇာတ်လမ်းဟာ IMDb Rating 5.6 ရရှိထားပြီး စိတ်အပန်းဖြေကြည့်ဖို့အတွက်သင့်တော် တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ အန်ရင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ သူ့အမေ ပြောစကားကိုဆိုရင် မလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီးအမြဲတမ်းတလွဲ လုပ်တတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..သူ့မှာ ဂျော်ဆိုတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းချောက်ချပြီး ပြသနာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ညီမလေးပေါ့..အန်ရင်းဟာ ထူးထူးခြားခြား ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောကျကာ..လေ့လာရတာ ၀ါသနာထုံပါတယ်..ဒိုင်နိုဆောပြတိုက် ကြီးမှာလည်းသူအမြဲတမ်းသွားရောက်လေ့လာတတ်ပါတယ်..တစ်နေ့မှာ အန်ရင်းရဲ့အမေဟာ တစ်နှစ်တာအတွက် Mother Of The Year ဆုကိုလက်ခံဖို့အတွက် သွားတဲ့အချိန်မှာ အန်ရင်းကိုသူ့ဆိုင်စောင့်ဖို့အတွက်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်..အန်ရင်းဟာ အမေစကားကို နားမထောင်ပဲနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း မက်စ် နဲ့အတူ ဒိုင်နိုဆောရုပ်ကြွင်းပြတိုက်ထဲက ကန့်သတ်ထားတဲ့ အခန်းကို ခိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်..ကံဆိုးချင်တော့သူ့ညီမဖြစ်သူ ဂျော် ကလိုက်ပါလာပြီး အချက်ပေးစနစ်ကို မြည်အောင်လုပ်လိုက်တော့ လူမိသွားပါတော့တယ်..ဒါကြောင့် အန်ရင်းကို သူ့အမေက သုံးပတ် အခန်းထဲပိတ်ထားမယ်လို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်..အန်ရင်းဟာအခန်းထဲကနေခိုးထွက်ပြီးတော့ သူ့သူငယ်ချင်းမက်စ် အိမ်ကိုခိုးသွားပါတယ်..အန်ရင်းခိုးထွက်တာကို မြင်တဲ့ ဂျော်ကလည်းနောက်ကနေ လိုက်လာပြီး အကွက်ဆင်ဖို့ချောင်းနေပါတယ်..မက်စ်ရဲ့အဖေဟာ တီထွင်တာတွေဝါသနာပါတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချိန်ခရီးသွားစက်ကိုတီထွင်နေတာ လေးနှစ်တာ ကြာခဲ့ပါပြီ..ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ကြောင့် ပါဝါမတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်..မက်စ်ရဲ့အဖေဟာ ဒီခရီးသွားစက်ကို အန်ရင်းနဲ့မက်စ်ကို ပြသလိုက်ပြီး အပြင်ဘက်မှာအလုပ်ထွက်လုပ်နေပါတယ်..အဲ့အချိန်မှာ ...
Home (2015) ကာတွန်းကားဆိုတာ ကြည့်တဲ့သူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ပါတယ် .. ကလေးတွေအတွက် Target ထားထားတာမို့ လို့ကာတွန်းကားအားလုံးနီးပါးက Happy Ending လေးတွေနဲ့ ပါ .. ကာတွန်းကားလေးတွေက ၀မ်းနည်းစရာတွေကို မေ့ပျောက်စေနိုင်ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကို အမြဲယူဆောင်လာပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ... . . ကာတွန်းကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုအပြင် ဘ၀သင်ခန်းစာတွေရော ၀မ်းနည်းဝမ်းသာရသပေါင်းစုံကိုပါ ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ .. ကလေးတွေတင်မဟုတ်ပဲ လူငယ်တွေကြားထဲထိပါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းကားကောင်းတွေ အများကြီးပါ .. Finding Nemo, Toy Story, WALL•E, Up, Dispicable Me, Frozen စသည်စသည်ဖြင့် အများကြီးပါ .. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Big Hero6အောင်မြင်မှုကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ .. တစ်ကားလုံးလည်း ရယ်ရတယ် .. ၀မ်းနည်းရတဲ့အခန်းလေးတွေဆိုလည်း နင့်နေအောင် ခံစားတယ် .. သင်ခန်းစာတွေလည်း ...
The Boxtrolls (2014) The Boxtrolls (2014) IMDb - 6.8/10_____Rotten - 77% Animation ပရိတျသတျတှအေတှကျ ထှကျထားတာ မကွာသေးတဲ့ ကာတှနျးဇာတျကားအသဈကို တငျဆကျလိုကျပါတယျ....IMDb Rating (6.8/10) ရရှိထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈလို့ ကာတှနျးကွိုကျပရိတျသတျတှလေကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ဇာတျကားပါ။ File size...1GB Quality....DVDRip Format...mp4 Duration....01:36:00 Subtitle....Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder....Nyeinsaeya Aung
IMDB: 6.8/10 53,200 votes